March 2020 - Puntland Mirror Believable Media Website
March 31, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa toogasho ku fulisay lix nin oo ay ku eedeeyeen in ay basaas u ahaayeen Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mareykanka iyo Kenya, sida ay ku warantay warbaahinta Al-Shabaab maanta oo Talaado ah. […]
March 30, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii gobolka Nugaal ayaa maanta oo Isniin ah lagu aasay qabuuro kuyaala magaalada Garoowe. Cabdisalaam Xasan Xirsi oo loo yaqiin Gujir ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray kadib weerar ismiidaamin ah oo lagu […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii gobolka Nugaal ayaa u geeriyooday qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay magaalada Garoowe xalay. Qaraxa oo ahaa qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qaxiyay gaariga guddoomiyaha xilli uu marayay bartamaha magaalada gaar […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi ayaa ku dhaawacmay qarax caawa fiidkii ka dhacay gudaha magaalada Garoowe Qaraxa oo ahaa qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qaxiyay gaariga guddoomiyaha xilli uu marayay bartamaha […]
March 28, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa joojisay dhammaan isku socodka gaadiidka iyo rakaabka ka imaanaya dhinacyada Somaliland iyo Dowlad Deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya si looga hortago xanuunka coronavirus, sida lagu sheegay war-saxaafeed ka soo baxay Wasaaradda […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shaqaale ajnabi ah oo la shaqeeya howlgalka Qaramada Midoobay ee gudaha Soomaaliya ayaa laga helay coronavirus, Qaramada Midoobay ayaa sidaas ku sheegtay war-saxaafadeed maanta oo Jimce ah. “Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay xaqiijineysaa […]
March 26, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kiiskii labaad ee fayruska coronavirus ayaa laga helay Soomaaliya, taasoo tirada ka dhigaysa labo kiis gudaha Soomaaliya, Wasiiradda Caafimaadka Soomaaliya Fowziya Abubakar ayaa sidaa sheegtay maanta oo Khamiis ah. Sida ay wasiiraddu sheegtay, […]
March 25, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay meherad shaah oo kutaala Muqdisho maanta oo Arbaco ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan labo qof, sida ay sheegeen ciidanka booliiska. Sargaal katirsan ciidanka booliiska Dowladda […]